Naya Bikalpa | पौडेलकै सहमतिमा स¥यो महासमिति बैठक - Naya Bikalpa पौडेलकै सहमतिमा स¥यो महासमिति बैठक - Naya Bikalpa
पौडेलकै सहमतिमा स¥यो महासमिति बैठक
प्रकाशित मिती: २०७५ भाद्र ११, ०९: ००: ०३
भागबण्डा नमिल्दा कार्यसम्पादन अनुशासन समिति गठन अवरुद्ध
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका असन्तुष्ट नेता रामचन्द्र पौडेलको सहमतिमै महासमिति बैठक तीन महिनापछि धकेलेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको शनिबार साँझ बसेको बैठकले भदौ महिना भित्र गरिने भनी पाँच महिनाअघि भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको निर्णय उल्टाउँदै महासमिति बैठक आगामी ५ देखि ९ मंसिरसम्म काठमाडौंमा गर्ने तय गरेको हो ।
गत बैशाख १६ गतेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले महासमिति बैठक भदौमहिना भित्र गरिक्ने निर्णय गरेको थियो ।
समितिमा बस्ने सदस्यको बिषयलाई लिएर सभापति देउवासँग नेता पौडेल र सिटौलाबीच सहमति हुन नसकेपछि समिति गठनमा ढिलाई भएको थियो । शनिबार मात्र सभापति देउवा र पौडेलबीच करिव ४ घण्टा लामो छलफलपछि मस्यौदा समितिमा २ जना जिल्ला सभपातिलाई स्थायी आमन्त्रित सदस्य राख्ने सहमति भएको थियो । यसअघि सभापति देउवाले ११ सदस्यीय बिधान मस्यौदा समिति गठन गरेका थिए । तर सभापति देउवाको सो प्रस्तावलाई केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले पास गरेको थिएन ।
शनिबार बिधान मस्यौदा समिति दुई जना जिल्ला सभापति थप गर्ने सहमति भए पछि सो प्रस्ताव अनुमोदन भएको थियो । तर दुई जिल्ला सभापतिमा क कसलाई राख्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन् । सभापति देउवा र असन्तुष्ट नेता रामचन्द्र पौडेलबीचको सहमतिमा राख्ने सहमति भएको छ ।
सभपाति देउवाले मस्यौदा समिति गठन गर्दा नेता पौडेल र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग ४ जना केन्द्रीय सदस्यको नाम मागेका थिए । मस्यौदा समितिमा बस्ने सदस्यको नामावली दिन पौडेलले ढिलाई गरेको आरोप संस्थापन पक्षको थियो ।
पौडेल पक्षले भने महासमितिको बैठकस्थल मिति निर्धारण, कार्य सम्पादन समिति, अनुशासन समिति लगायतका विभाग गठन गर्ने बिषयमा प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । तर देउवाले पहिलो मस्यौदा समिति गठनपछि मात्र ति समितिमा पनि सहमति गर्ने भनेपछि पौडेल पक्षले ४ जनाको नाम चार साता अघि दिएको थियो ।
पौडेलले दिएको नामहरुमा मधेशी, महिला र जनजातिलाई समेट्न नसकेको भन्दै संस्थापन पक्षले समिति गठन नगरी बसेको थियो । पछि देउवाले आफ्नै पक्षबाट राख्ने समिति सदस्यमा समावेसी अनुहार राख्ने भनी गठनको तयारी गरेका थिए । तर देउवाले पौडेल र सिटौलासँग गरेको सहमति बिपरित नौं सदस्यको सट्टामा ११ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेका थिए ।
आफुहरुको सहमति बिपरित दुई जना सदस्यको नाम थप गरी ११ जना राखेकोमा असहति जनाउँदै पौडेल पक्षले गत असार दोश्रो साता हेटौंडामा भएको सभापति भेलाको घोषणा पत्र र त्यसप्रति सभापति देउवाले जनाएको सहमति बमोजिम जिल्ला सभापतिहरुको समते प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गरिनु पर्ने अडान पौडेल पक्षले लिए पछि शुक्रबार बस्ने भनिएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्दै नबसी शनिबारसम्मको लागि सारिएको थियो ।
दुवै नेताबीच बिधान मस्यौदा समिति गठनलाई अनुमोदन गर्दै महासमिति भेला मंसिरमा सार्ने सहमति गरेका थिए । तर, अर्का असन्तुष्ट नेता सिटौलासँग सल्लाह र सहमति नगरी अनुशासन समिति र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्ने सहमति दुबै नेताबीच भएको छ । जस अनुसार पौडेलले ४० प्रतिशत सदस्य कार्य सम्पादन समितिमा पाउने छन् भने संस्थापन पक्षले ६० प्रतिशत लिने भएको छ ।
कार्य सम्पादन समिति र अनुशासन समिति भने आगामी २१ भदौमा बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने सानेपा स्रोतले वतायो । अनुशासन समितिमा सभापति देउवाले भिष्मराज आङदम्बेलाई संयोजक बनाउने तयारी गरेका छन् । विधान बमोजिम ५ सदस्यीय अनुशासन समितिको सदस्यमा देउवाले संस्थापन पक्षबाट दुई जना केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेल र किशोरसिंह राठौरको नाम प्रस्ताव गरेका छन् । पौडेलको पक्षमा २ जनाको नाम सिफारिस गर्न भनिएको छ तर पौडेलले २ जनाको नाम पठाउँदा असन्तुष्ट नेता सिटौलालाई समेट्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ । उनले एक जना महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको सिफारिममा र अर्को एक जना आफ्नै विश्वास पात्र राख्न चाहन्छन् ।
अनुशासन समितिमा पूर्वमहामन्न्त्री प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलाको पक्षबाट कोही पनि नपर्ने निश्चित भएपछि अनुशासन समिति निर्माणको बिषयलाई लिएर बिबाद चर्कने सम्भावना प्रवल भएको छ । यसअघि देउवाले गठन गरेको अनुशासन समितिका संयोजक रमेश रिजालले सभापति देउवासँग असन्तुष्टी जनाउँदै पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।
उनको राजिनामसँगै समिति विगत ८ महिनादेखि निष्कृय थियो । सो समिति विघटन वा निष्कृय भएको जानकारी केन्द्रीय कार्य समितिलाई नदिई सभापति देउवाले अर्को समिति बनाउन लागेका छन् । देउवाको यस्तो तयारीको सिंह, सिटौला र पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसी लगायतले असन्तुष्टी जनाएका छन् । यसअघिको समितिमा सिटौला पक्षबाट उमाकान्त चौधरी सदस्य थिए । पौडेल पक्षबाट भने सरिता प्रसाईं र हृदयराम थानी थिए ।
त्यस्तै, २८ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति पनि भागबण्डा नमिल्दा गठन हुन सकेको छैन् । समितिमा भागबण्डाको आधारमा सभापति देउवाले ६० र नेता पौडेलले ४० प्रतिशत सदस्य भाग लिएर गठन गर्ने प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै सिटौलापक्षधर केन्द्रीय सदस्यले बिरोध जनाएका छन् । देउवाको यस्तो योजनाको डा. शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी र प्रकाशमान सिंहले समेत आपत्ति जनाएका छन् । केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा पदाधिकारीबाहेक २२ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्नुपर्छ ।
बिधान मस्यौदा समितिमा को को छन ?
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विहिबार महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विधान मस्यौदा समिति बनाएका थिए। समितिमा सहमती भएभन्दा बढी संख्या राखेर बनाइएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले असहमती राखेपछि २ जना जिल्ला सभापति राख्ने सहमतिसँग केन्द्रीय कार्य समिति बैठक शनिबार बसेको थियो ।
समितिमा जिल्ला सभापतिलाई राख्ने वा नराख्ने भन्ने बिषयलाई लिएर सभापति देउवा र पौडेलबीच बिबाद भएको थियो । जसका कारण हिजो शुक्रबारका लागि डाकिएको केन्द्रिय समिति बैठक विवाद भए पछि बस्दै नबसि स्थगित गरिएको थियो । समितिमा पौडेल पक्षबाट चार जना राखिएको छ । चार जना भनिए पनि पौडेलपक्षबाट काठमाडौंका नविन्द्रराज जोशी परेका छन् । दुई केन्द्रीय सदस्यहरु डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल र दिलेन्द्र प्रसाद बढु दुवै जना महामन्त्री डा. शशांक कोइराला गुटका हुन् । बिधान मस्यौदा समितिमा परेका अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेल भने कृष्णप्रसाद सिटौला गुटका हुन् ।
समितिको संयोजक रहेका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का देउवा गुटकै हुन भने वाँकी ६ जना केन्द्रीय सदस्यहरु पनि देउवा गुटकै छन् । देउवा गुटबाट विधान मस्यौदा समितिमा पर्ने सदस्यहरुमा हालै मात्र पौडेल गुट छोडेर औपचारिक घोषणा नगरेका आनन्दप्रसाद ढुंगाना, महालक्ष्मी उपाध्याय, सीता गुरुङ, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, मानबहादुर विश्वकर्मा, फर्मुल्लाह मन्सुर र रमेश लेखक रहेका छन् । देउवा गुटबाट सदस्यमा रहेका मन्सुर र ढुंगाना उपसभापति निधि निकटका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
२०७५ भाद्र ११, ०९: ००: ०३